Ama-infochimps: Ochwepheshe Bakho Beplatifomu Yakho Enkulu | Martech Zone
NgoLwesibili, Januwari 29, 2013 NgoMgqibelo, Januwari 14, 2017 Douglas Karr
Njengenhlangano, amaklayenti ethu asicela ngokuya ngokwengeziwe ukuba siqonde inani elikhulu ledatha abalinikezwa ezinjinini zabo zokubika - i-CRM, i-imeyili, iMedia Media, njll. Kuze kube manje, sesidonse le datha yaba idatha sigcina kuseva yethu yangaphakathi, sayimasaji, bese sithumela imininingwane ebesiyidinga.
Imininingwane, noma kunjalo, iba nzima kakhulu ukuhlunga, ukuhlukanisa kanye nokwabela. Imithombo yezokuxhumana, isibonelo, inikezela ngemicu kanye nama-URL emininingwane okumele ahlolwe ukuze amakwe kahle, ahlukaniswe futhi abikwe kuwo. Futhi iwindi lesikhathi esicelwe ukuba sisebenzise le datha liya ngokuncipha futhi lincane. Umthamo wedatha uyakhula futhi uba mkhulu - futhi kunzima ukuphatha. Amakhasimende ethu adinga izimpendulo… manje.
Faka izixazululo ezinkulu zedatha njenge-Infochimps. Ama-Infochimps aqale ibhizinisi lawo ngokugxila ekuphatheni izinkulungwane zamasethi wedatha ngephupho lokuba yi-'wikipedia 'yedatha. Kodwa-ke, ngokuhamba kwesikhathi, bathole ukuthi inani nobuchwepheshe abakunikeze ngempela kwakha ingqalasizinda kanye nensizakalo engaphatha idatha enkulu ngempumelelo.
Noma ngabe uyisiqalo esisha esiqhuma ekukhuleni futhi singcwatshwa kudatha, noma inkampani yebhizinisi edinga usizo lokuhambisa isixazululo esizosiza ukukhipha, ukukhohlisa nokwethula idatha engenzeka, i-Infochimps ingasiza. Inzuzo eyengeziwe endaweni yesikhulumi njengensizakalo? Sebevele benamadathasethi angaphezu kwe-15,000, futhi bangabanye babambalwa Gip ophathina abahlinzeka nge-firehose yemininingwane yezokuxhumana.
Ukuthunyelwa okujwayelekile ngama-Infochimps kuyinhlanganisela yezinsizakalo zangaphakathi ukwakha ingqalasizinda kuhlanganiswe nomsebenzisi ukufinyelela nokuthuthukisa amathuluzi. Ama-Infochimps ahlukile phakathi kwamapulatifomu wedatha amakhulu ngenxa yokuguquguquka kwawo kosayizi bokuphakwa.
Ukubuka konke kwepulatifomu ye-Infochimps:
Ingqimba yengqalasizinda - Imishini ecashile eyenza ukuqoqwa kwedatha nokuhlanganiswa, isikhathi sangempela analytics, iqoqo elikhulu analytics, kanye nokugcinwa kwedatha.
Idatha Delivery Service ™ - I-DDS ihlangana ngaphandle komthungo nemvelo yakho ekhona, inikezela ngamakhono we-ETL (akhiphe-aguqule umthwalo), futhi inike amandla isikhathi sangempela, ukusakazwa kwedatha kwezibalo.
Ukuphathwa kwedatha - Noma ngabe yi-HBase, i-Cassandra, i-Elasticsearch, i-MongoDB, i-MySQL, noma abanye, siqinisekisa ukuthi ukulondolozwa kwedatha okulungile kwalowo msebenzi kuhlale kutholakale kalula.
I-Cloud Hadoop - Yenza ukuhlaziywa kwe-batch enkulu njengoba uyidinga, noma ngabe amaqoqo e-ad-hoc Hadoop noma ukuhamba komsebenzi wokukhiqiza njalo. Finyelela wonke amathuluzi owadingayo, ngokukala okufunwayo nokushuna.
Isendlalelo sohlelo lokusebenza - Izindlela zokuxhumana zokwenza i-Big Data ifinyeleleke kalula, kufaka phakathi ukuhleleka analytics ithuluzi lokubhala, ideshibhodi yokuqhafaza, ne-API enamandla.
I-Wukong - Inikeza lula analytics isipiliyoni sokubhala. Bhala eyakho analytics kuRuby onobunjiniyela, sebenzisa ikhodi yangakini ngemijikelezo yokuthuthuka esheshayo, futhi usebenzise okukhona analytics imibhalo.
I-Dashpot ™ - Dala ukubonwa kwesikhathi sangempela kusuka kudatha yokusakaza, uthole ukubonakala okujulile kuzinhlelo zakho zePlatform, bese uqala ngokushesha futhi umise amayunithi asebenzayo kumaqoqo wakho wedatha.
Ipulatifomu API - Nge-API ebumbene, ukulawulwa kwepulatifomu nokubonakala kwemininingwane engaphakathi kuyo ngezinye zezicelo ezimbalwa zewebhu ezikude. Okwamanje ku-beta.
Isibonelo: Inkampani enkulu yemidiya yakhe inkundla yokulalela yemidiya yezenhlalo eqoqa imifudlana eyi-18 yemininingwane yezokuxhumana. Ukusakaza kunwetshwa ngolwazi lobulili, kuhlanganiselwe imininingwane efingqiwe, kukhishelwa izibali, kufakwe umuzwa, futhi kusebenze izaziso lapho kuceliwe. Inhloso yohlelo ukuhlinzeka amakhasimende ngezindaba zesikhathi sangempela. Amanye amakhasimende afaka phakathi Cisco, IBlackLocus, IRuna, I-Whaleshark Media, Futhi IBlue Cava.
Hlela idemo ngama-Infochimps noma i-imeyili info@infochimps.com ukuze uthole olunye ulwazi.
Tags: Apiidatha enkuluifu hadoopidashpotinsizakalo yokulethwa kwedathaUkuphathwa kwedathahadoopinfochimpswukong
Feb 7, 2013 ngo-8: 51 AM
Uma ngingaqali, i-infochimp luhlobo lwensizakalo olungalalela lokho abantu abakudingayo kwi-medai yezenhlalo bese amaklayenti akwazi ukuhlela into ngokufanele ingabe kunjalo? Ngingaba nentshisekelo ngewebhusayithi yami.
Feb 7, 2013 ngo-4: 55 PM
Lowo ngomunye wemithombo yedatha abangayinikeza futhi ungakha insizakalo yokuqapha ngalokho. Kodwa-ke, lelo akuyona ibhizinisi labo eliyinhloko.